Kuzoqiniswa umthetho kwabamakayo | Isolezwe
Kuzoqiniswa umthetho kwabamakayo
Isolezwe / 12 November 2012, 12:12pm /
UZOQINA umthetho ezikhungweni zokumaka amaphepha kamatric kulandela ukuvela kwemibiko yokuthi othisha abamakela izingane bazitika ngotshwala nocansi nsukuzonke besezikhungweni zokumaka.
Lezi zindaba ezishaqisayo zivezwe ngothisha abamakayo abathe abanye ozakwabo bazikhohlwa nokuthi bashadile ngendlela abaziphatha ngayo nsuku zonke zokumaka.
Uthishomkhulu wesikole esihlonishwayo eThekwini ongathandanga negama lakhe uthe kuyethusa okwenzeka ezikhungweni zokumaka uma kuphela usuku.
“Uma kuphela usuku othisha bayaphuza, abanye bazitike ngocansi. Bakhohlwa ngisho ukuthi bashadile uma sebenza le migilingwane. Yize kukhona othisha abasuke bazi kahle ukuthi bayokwenzani esikhungweni sokumaka kodwa kunalabo abavele babone kuyiholidi lamahhala,” kusho lo thishomkhulu.
Lokhu kuqinisekiswe nguMnuz Anthony Pierce we-National Professional Teachers Association of SA (Naptosa), othe amalungu abo ayakhala ngamaphathi enziwa ezikhungweni zokumaka.
UPierce uthe yize isimo sisuke siqashwe ngeso lokhozi ezikhungweni zokumaka kodwa kwenzeka noma yini ngezikhathi ezahlukene.
Bangu-7 600 othisha abazobe bemaka amaphepha abafundi bakamatric ezikhungweni ezingu-23 KwaZulu-Natal.
Abangu-1 512 ngabamaki abanamava, abangu-203 ngamasekela abo bese kuthi abangu-76 bangama-chief markers.
Ukumaka kuqala ngoDisemba 2 kuzo zonke izikhungo.
Kulo nyaka kube nesidididi ngodaba lokumaka njengoba othisha abamakayo betshelwe sekudlule isikhathi ukuthi bazobe bemaka.
Kuke kwaba nokukhala ngezivivinyo zothisha abamakayo abashaya phansi ngonyawo ukuthi ngeke bazibhale.
Ngokusho kwezazi zezemfundo ezahlukene ezenziwa ezikoleni, othisha abamakayo abekho ezingeni ngoba sekuvele kuthathwe noma ngubani ukuba ayomaka.
Lezi zazi zithi uMnyango wezeMfundo awusathathi labo thisha abasuke beziqonda kahle izifundo ezibhalwa yizingane.
Omunye uthishomkhulu ongathandanga ukudalulwa, uthe kuyethusa ukuthi othisha bamanje baphuza udede balale amahora amabili noma amathathu bese bevuka ekuseni beyomaka.
Uthe ngonyaka odlule aboMnyango wezeMfundo basusa othisha ababengaziphethe kahle ezikhungweni zokumaka kodwa lokhu akukaze kukhulunywe ngakho kwazise imihlangano ye-exam board ilokhu ihlehliswa.
Uthisha we-Life Orientation uthe kuyaziwa ukuthi kumaka othisha beSadtu ekhetha abantu ababodwa minyaka yonke.
Inhloko yoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uDkt Nkosinathi Sishi, uthe akawazi yena lamaphathi okuthiwa ayenzeka futhi umuntu otholwe eshushumbisa utshwala esikhungweni sokumaka uzoboshwa.
“Izikhungo zokumaka ziqashwa ngeso lokhozi kangangoba izikole ezisuke zizoba yizikhungo zilandela imigomo enzima. Uma sike sathola ukuthi kunesikhungo okwenziwa kuso amaphathi ngeke kuphinde kumakelwe kusona. Engikwaziyo wukuthi akukho okungahambi kahle ezikhungweni zokumaka konke kumi ngomumo,” kusho uSishi.
UMnuz Allen Thompson oyiPhini likaMengameli wenyunyana yothisha i-National Teachers Union, uthe akazi ukuthi kunama-phathi enzeka ezikhu-ngweni ngoba imithetho yakhona icacile ukuthi ngeke kwemukelwe ubudlova.
“Othisha abamakayo basayina isibophezelo sokuziphatha kahle esicacisa ukuthi ngeke baphuze noma badlale umculo phezulu. Uma othisha bengalandeli imithetho kufanele baxoshwe ezikhungweni. Angeke sibamele abantu abangaziphethe kahle,” kusho uThompson.
UMnuz Mbuyiseni Mathonsi onguNobhala we-Sadtu KwaZulu-Natal, uthe abaphathi ezikhungweni basuke bezogwema ukungaziphathi kahle kwabamakayo.
Ukuphikisile ukuthi kukhethwa othisha be-Sadtu ukuba bamake esho nokuthi le nyunyana inamalungu amaningi ngakho-ke nasezikhungweni zokumaka amalungu abo maningi.
UMnuz Tom Stokes obhekelele ezeMfundo kwi-DA, uthe ayikho inkinga ngokuthi othisha baphumule emuva kokusebenza kanzima kodwa kunendlela ehlelekile yokwenza lokhu.
“Asisho ukuthi othisha bangajabuli ezikhungweni kodwa kufanele bose inyama baphuze iziphuzo ezimbalwa kodwa ngendlela ehlelekile.”